စီးကရက်တစ်လိပ်မှာ ပါဝင်တာတွေ သင်သိပါသလား ? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
စီးကရက်တစ်လိပ်မှာ ပါဝင်တာတွေ သင်သိပါသလား ?
ဓာတ်ခဲတွေထဲမှာထည့်တဲ့ Cadmium လို့ခေါ်တဲ့ ခဲသတ္တုအမှုန့် ပါဝင်ပါတယ်။
ဂက်စ်မီးဖို၊ ဂက်စ်မီးခြစ်အတွက်သုံးတဲ့ Butane လို့ခေါ်တဲ့ Hydro Carbon ပါဝင်ပါတယ်။
အသားကင်တဲ့အခါ တူးရင် ထွက်လာတဲ့ Hexamine လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။
Toulene လို့ခေါ်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဂျီးချွတ်တဲ့ အရက်ပျံ ပါဝင်ပါတယ်။
Insecticide လို့ခေါ်တဲ့ ခြင်ဆေးဖျန်းဗူးထဲမှာ သုံးတဲ့ Nicotine ပါဝင်ပါတယ်။
အိမ်သာဆေးတဲ့အရည်မှာ ပါတဲ့ Ammonia လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Tar လို့ ခေါ်တဲ့ လမ်းခင်းတဲ့ ကတ္တရာစေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကဲ ... ဆေးလိပ် ဆက်သောက်နေဦးမှာလားဗျာ။